Author: Zulukinos Mauktilar
Dhammaan waxay ku salaysan yihiin barnaamijyo Dhaqanka iyo Hiddaha Soomaalida aan kaga faalloon soomalida, kana baxay idaacadaha Afsoomaaliga ku hadla qaarkood sida Gabayzda Muqdisho, Raadyo Hargeysa, Laanta Afsoomaaliga ee BBCda iyo, ugu dambaysta, Laanta Afsoomaaliga ee Codka Maraykanka, magaceedana Voa lagu soo gaabiyo.
Ninkaa dambe waxaa magac ugu baxaa beyd gaab iyo goray ciil, waxaana lala mataaniyaa macallin qoryaale iyo kitaab gaab aan Todobada Mingaliyo iyo Suddamada dhinacna u dhaafin. Qamaan Bulxan isna waa kii labada geed kala booday Maxamed Fiin markii uu ku guuldaraystay inuu arko hadafka iyo habboonaanta maansada Maxamed.
Silsiladda Xulka Suugaanta Soomaalida: Gundhigga
Soomaalida dhulkeeda qariirad ahaan dhaca dariska qariirada Carabta, ayaa waxaa jirta in Soomaalida ay sida Carabta qiimo badan suugaantu u leedahay iyada oo dhaqanka iyo hidaha soo jireenka ah ee ab’ ka soo gaadhka ah ay in badan ku dheehantahay qadarinta suugaanta.
Horraantii aadkii ayey ururo mucaarad ahi ku kaceen dowladii Maxamed Siyaad, jabhadihii gobonimo doonka. Haddaan uba daayo dooda sida aad u dhigteen saw dullinimo ma aha in qoys kale kiina isku diro oo maylinka isugu. Waxaa caado ahayd rag door ah oo dhinac kasoo wada jeeda ama isku afkaar ah oo aan waxba isku diidanayn inay isku xigaan oo ay kaliya isu marxabeeyaan.
Deelqaafka iyo gebidhacu saw. Waxaan aad uga helay sida hufan ee Dhoodaan u dhaliilay garaadka Cabdi Iidaan iyo gabayga kasoo yeedhayba. Suuragal ma Ahan in Xamar Xubno loo Raadiyo. Ergo Daarood ayey wadajir ugu yeedheen gabayadaas. March 21, waxaa sanad walba dunida laga xusaa maalinta gabayada aduunka, Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu hodansan gabayada iyo sugaanta.
Wax la isula hadhay iyo maaddo laga gabyi karo oo raggii soo galay carabka la gafeyna lama sheegin. Dhaanto Saar Saylici Fanka Soomaalida.
Your email gaabyada will not be published. Nin reer miyi ah oo xafidsan gabay 29 Oktoobar Qarnigii 14aad waayihii uu noolaa ANU Sheekh Cabdiraxmaan Saylici, waayihii dhexe ee Suldaan Diiriye oo ku beegan qarnigii ay noolaayeen aabayaashii Raage Ugaas, Wiilwaal iyo ragii ay isku waqtiga ahaayeen oo haatan laga joogo labo qarni iyo bar ama yadii, ayaa hobolada ku caan baxay suugaanta iyo maansada noocyadeeda kale duwan sida gabay, geeraar oo faraca sare waxaa soo bilowda diiwaanka magacyada la yaqaan hobaladaas ama abwaanadaas caanka ah.
Wuxuu jeclaa Qamaan inaan Cali Dhuux iyo isaga la dhex marin, gabaygan uu Maxamed ugu jawaabayna wuxuu arkayey inuu kaga haboonaan lahaa inuu Cali jawaab u noqdo marka uu mid kale soo celiyo.
Soomaalidu way ku dheeraysaa xafidaadda gabayada gaar ahaan dadka reer miyiga ah oo qaar badan oo ka mid ah iyagoo aan wax qorin waxna aqrin xafida boqolaal murtida Soomaalida ka mid ah gaar ahaanna gabayada. Halqabsi iyo odhaahyo badan oo maanta bulshada dhexdeeda caan ku ah ayaa waxay ka baxeen gabayo taxane ah. Suugaanta inta ay ka koobantahay-deeganaada geyiga Soomaaliyeedn, degmo walba waxay leedahay cayaaro hidaha soohdinta dhow ay ku caantahay; galbeed, waqooyi, gobollada dhexe, bari, bartamaha wadanka, koonfur soomaaljda galbeed bari ee Kiinya haysato.
Wuxuu haddaba codsaday inay u yimaadaan si uu kitaab baallaha u jaro. Abwaanku wuxuu eegaa sababta iyo qiimaha gabayga, ninka tiriyey iyo culayskiisa, iyo ku habboonida waqtiga iyo waayaha uu ka hadlayo.
Dadkaas waxaa ka mid ah Daahir Cumar Buraale, oo isagu xafidsan in ka badan boqol gabayada Soomaalida ah oo uu bilaabay isagoo da’yar. Aduunka suugaanta daabacan, gaar ahaan maansada; Carab ayaa leh suugaanta ugu fac wayn aduunka gabyada oo noocyo badan oo kala duwan ay jirto suugaanta Carbeed.
Goloyaashiisii ayaa abaabulay dicaayad ah in dowladu qoys tahay, dadka soomaaoida kacsanina qoysas kale yihiin.
Maxamed wuxuu tiriyey gabayo dhawr ah oo Cali Dhuux ku qasbay inuu calanka cad taago silsiladdiina dabro. Bal u fiirso, Yamyam oo ahaa ninkii afraad ee heesa ayaa xataa ku wareersan ujeedadii Deelleey ee sida raadka gaadhiga dhinac walba u jeeday.
Levereras inom vardagar. Cabdi Galayax ayey intaasi si gooni ah u dhibtay oo jawaab ka bixiyey. Hurgumo waa silsilad aadkii uu shiniyeeyey Khaliif Sheekh Maxamuud.
Golaha88 oo Wareystay Amb. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Silsiladdan waxaa kiciyey neef geel ah oo ay niman Camanje Abasguul ku eedeeyeen inuu ka dhacay. Duraaqsaygii Dhoodaan ee Ergo Daarood jawaabta u ahaa waxaa ka mid ahaa beydadkan hoose. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.
Silsiladdaha caan baxay waxaa ka mid ah Guba. Shanta beyd ee xigta ee ay abwaaniinta kale Falastiin kaga hadleen wuxuu Dhoodaan kaga jawaabay 10 kan hoose. Habka ku luuqaynta suugaanta maansada, gaar ahaan hooyaalayeey ayaa wuxuu gagayada waayihii abwaanka caanka ah ee Raage Ugaas Warfaa, isuguna noqday qofka habkaas soo caanbixiyay.